कसरी देलान् अर्थमन्त्री कार्कीले आफ्ना आलोचकलाई जवाफ? - हिमाल दैनिक
कसरी देलान् अर्थमन्त्री कार्कीले आफ्ना आलोचकलाई जवाफ?
जर्मनको हाइडरवर्ग यूनिभरसिटीमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाएर पढ्न गएको थिएँ। सन्त नेता भट्टराईजीले सत्याग्रहमा भाग लिन नेपाल फर्किन खबर पठाएपछि पिएचडीको सपना छाडेर नेपाल फर्किएँ।
३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार १०:३४
काठमाडौं, जेष्ठ ३१
‘बोल्नेको पीठो विक्छ तर नबोल्नेको चामल पनि विक्दैन,’ भन्ने उखान नेपाली समाजमा धेरै सामान्य भइसक्यो।
राम्रो गरेर पनि गुमनाम भएका तर खासै उल्लेख्य काम नगरीकन चर्चा कमाएका पात्रहरुको सूचि लामै छ हाम्रो देशमा। त्यसैले त धेरैले यहाँ सपनाको ब्यापार गर्छन्, जुन समाजले चाँडै पत्याउँछ र त्यस्ता पात्रहरुले सजिलै चर्चा पनि कमाउँछन्।
तर कतिपय यस्ता पात्र छन् जसले देशको भलाईमा ऐन मौका पाउँदा राम्रै काम गरेर पनि गुमनाम रहन्छन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण हुन सक्छन्, कांग्रेस नेता तथा नवनियुक्त अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की।
नाम सुन्दा औसत जस्तै लाग्छ। तर उनले गरेका कामहरुले जति चर्चा कमाउनु पर्दथ्र्याे र यसले उनलाई जति चर्चित बनाउनुपर्दथ्यो त्यो नभएकै हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता कार्कीको स्वभाव नै यस्तै छ कि उनी कम बोल्छन्, आफ्नो प्रचार भन्दा पनि बढी काममा जोड दिन्छन् र त्यसको परिणाममा नै उनको बढी ध्यान केन्द्रीत हुन्छ। त्यसैले त उनी राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिए रहेर पनि औसत नेताकै रुपमा चिनिन्छन्।
आज हरेक नेपालीले गर्व गर्ने र जुनसुकै पार्टीको सरकार बनेपनि सबैले उदाहरण्का रुपमा लिने स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुवात नै उनी जलस्रोत मन्त्री भएकै बेलामा अघि बढेको थियो भन्ने जानकारी धेरै कमलाई मात्र होला।
नेपालले स्वदेशी पुँजीमा मेगा प्रोजेक्ट निर्माण गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण् हो यो। यति मात्र नभएर नेपालमा बहुचर्चित अरुण तेस्रो परियोजा र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना पनि उनकै पालामा अगाडी बढेको थियो। तर उनले आफ्नो कार्यकालमा भए गरेका यी कामलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रचारको सामग्री बनाएनन्।
यति बेला उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् र कतिपयले उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले भने, ‘म तथ्यांक बुझ्दिन, जनताको दैनिकीमा के परिवर्तन आयो भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु।’ उनको यो भनाईलाई कतिपयले फरक ढंगले लिँदै उनका विरुद्ध प्रचारबाजी पनि गरे।
यसैसन्दर्भमा यो पंक्तिकारलाई पनि कार्कीको वास्तविकता जान्ने र बुझ्ने जिज्ञासा विगत केहीदिन यताबाट जाग्यो।
त्यसैले नवनियुक्त अर्थमन्त्री कार्कीसँग निरन्तर भेट्न प्रयास गर्दा शनिबार अवसर जुर्यो।
अपरान्ह नख्खुस्थित उनका बाबु आमाको घरमा पुग्दा आमासँग बसेर भलाकुसारी गरिरहेका मन्त्री कार्की सेतो कुर्ता सुरवालमा थिए।
देशको अर्थमन्त्री भइसकेको व्यक्तिमा त्यतिबेला कुनै अहंमता झल्किएको थिएन। त्यसपछि हामी कुराकानी गर्न शुरु गर्यौं।
भोजपुरको देउराली गाविसमा २०१३ सालमा एक मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका पाँच भाई मध्ये जेठा कार्कीले बाल्यकालदेखि नै कुनै आर्थिक अभाव झेल्नु नपरेको बताउछन्।
१४ वर्षकै कलिलो उमेरमा दश कक्षामा अध्ययन गर्दै गर्दा २८ सालमा भोजपुरको स्कूलमा स्ववियू निर्वाचन भयो।
सभापतिको पद बाहेक अन्य पदाधिकारीको पद रोजेर चुनाव लड्ने छुट पाएका कार्कीले साथीहरुसँग सल्लाह गरेपछि सभापतिपछि सबैभन्दा शक्तिशाली पद कोषाध्यक्ष हो भन्ने बुझेर त्यहि पद रोजे र निर्वाचनमा विजय पनि भए।
राजनीतिक चेतनाको जग बसाउने कार्यको श्रेय उनी आफ्नै पिताजीलाई दिँदै भन्छन्ः ‘मेरो बुबा त्यतिबेलाको सामाजिक अभियन्ता भएकोले उहाँले आफ्ना समकक्षीहरुसँग कांग्रेसका नेताहरु वीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसादको कुरा गर्ने गर्नुहन्थ्यो।’
उहाँहरुकै कुराकानी सुनेको भरमा आफ्नो वालसुलभ मष्तिस्कमा राजाले १७ सालमा अन्यायपूर्ण कदम चालेर देश, जनता र प्रजातन्त्रका लागि लडेकोे कांग्रेस र यसका नेताहरुलाई जेलमा हाले भन्ने लाग्यो।
समाज परिवर्तनको बाहक कांग्रेस नै रहेछ भन्ने लागेपछि उनी कांग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशिल भए।
स्कूले जीवन सकेर भोजपुर क्याम्पसमा अध्ययनका लागि जाँदा शुरुमा अर्थशास्त्र र राजनीति शास्त्र कुन रोज्ने भन्ने दोधार हुँदा आफ्नो राजनीतिक क्रियाशिलता देखेर तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद जोशीले राजनीति शास्त्र नै पढ्न सुझाएको उनी सम्झन्छन्।
२८ सालतिरकै अवस्थामा पनि भोजपुर क्याम्पसमा तत्कालीन मालेको विद्यार्थी संगठन अखिलको ठूलो दबदबा थियो। त्यहिबेला क्याम्पसमा भएको स्ववियू निर्वाचनमा सचिव पदमा उनी नेविसंघबाट निर्वाचित भए।
क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा वनारसबाट प्रकासित हुने तरुण पत्रिका वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न हुँदा पनि त्यतिबेला उनका बुबाले सैनिक व्यारेकमा रासनको ठेक्का गर्ने गरेको कारण प्रशासनबाट खासै समस्या नपरेको स्मरण गर्दछन्।
२०३२ सालमा उनी काठमाडौमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि आए र त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भर्ना भए। त्रिचन्द्रमा आएलगत्तै उनी विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न भए।
त्यहिबेला कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराइसँग भेट भयो।
३३ सालमा वीपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किए।
त्यसपछि वीपीको हस्ताक्षर भएको र हस्ताक्षरको छाप भएको दुइथरी अपिल वितरण कार्यमा उनी लगायत पाँच छ जना विद्यार्थी क्रियाशिल भएका थिए। रातभरी त्यो अपिल वितरण गरेको आरोपमा उनी र उनका साथीहरु गिरफ्तार भए। हनुमान ढोकामा थुनामा राख्दा वीपीको अपिलमा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षरको स्ट्याम खोजतलास गर्ने नाममा उनीहरुलाई प्रहरीले चरम यातना दियो। साइकलको टायरले पिट्नेदेखि पुस माघको चिसो ठण्डीमा नांगै बनाएर चिसोपानी खनाइदिने र त्यसपछि माटोको हिटर ताप्न लगाएर करेन्टको याताना पनि दियो। तर उनीहरुसँग वीपीको हस्ताक्षरका लागि बनाइएको स्ट्याम्प भने थिएन।
त्यसपछि उनीहरुलाई नख्खु जेलमा सारियो, जहा सन्त नेता भट्टराईसँग भेट भयो। झण्डै १८, १९ महिना थुनामा रहदा भट्टराइको आर्दश, निष्ठा र समर्पण भावको राजनीतिक जीवनबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा झन सक्रियताका साथ लागे।
हरेक आन्दोलनमा क्रियाशिल भए र गिरफ्तारमा पर्दै गए।
३६ सालमा त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा स्ववियू सचिव भए। त्यतिबेला पार्टीका हरेक गतिविधिहरु विद्यार्थी संघ मार्फत हुने गथ्र्यो।
न्यूरोडमा बुट पोलिस गरेर विद्यार्थीहरुले संगठनका लागि चन्दा उठाएको स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘त्यतिबेला अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन। हामीले पार्टी नेताको उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्नदखि पार्टी सञ्चालनका लागि समेत कोष जम्मा गर्नु पर्दथ्यो।’
वीपीको जीवनकालको अन्तिम समयतिर सन्त नेता भट्टराइको प्रस्तावमा उनी नेविसंघको सभापति बने र ४१ सालमा बनकालीमा विद्यार्थी संघको अधिवेशन गर्दै गर्दा अधिवेशनस्थलबाट उनी पक्रउ परे। जहाँ देशभरीबाट आएका झण्डै एक हजार विद्यार्थी गिरफ्तारमा भएका थिए। जुन त्यतिबेलाको सत्याग्रहको पूर्वतयारीमा गरिएको रिर्हसल वा आधार बन्न पुग्यो।
त्यतिबेला आफूलाई विदेशमा गएर अध्ययनको इच्छा जागेपछि भट्टराइले नै जर्मनको हाइडरवर्ग यूनिभरसिटीमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाएर पढ्न पठाए। राजनीतिक छात्रवृत्तिमा पढ्न गएपनि त्यतिबेला कलेजले प्रतिमहिना २२ सय मार्क दिने गर्दथ्यो, जुन त्यतिबेलाको ठूलो पैसा मानिन्थ्यो।
त्यहि सयममा नेपालमा सत्याग्रहको तयारी भइरहेको थियो। भट्टराइले उनलाई पत्र लेखेर सत्याग्रहमा भाग लिन नेपाल फर्किन भने। भट्टराइको आदश शीरोधार्य गर्दै आफ्नो पिएचडीको सपना छाडेर उनी नेपाल फर्किए र आन्दोलनमा होमिए।
सत्याग्रहको पहिलो दिन गिरिजाबाबुको योजनामा केही छानिएका कार्यकर्तासहितको जुलुस पुतलीसडकबाट सिंहदरबार बढ्दा गरिफ्तारमा परे।
४६ सालको आन्दोलनमा भने भूमिगत भएर आन्दोलनको कार्यक्रमलाई तीब्र बनाउन सक्रिय भए। आन्दोलन सफल भयो।
आन्दोलन सफल भएर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि उनलाई लाग्यो, अब राजनीतिमा क्रियाशील रहिरहन आवश्यक छैन। त्यसैले उनले पहिले दबाएर आएको पिएचडी अध्ययनको धोको पूरा गर्न फेरि विदेश जाने कुरा गरे।
तर भट्टराइले उनलाई विदेश जाने कुराबाट रोके र आफैसँग बसेर काम गर्न भनेपछि उनका सहयोगीका रुपमा क्रियाशील भए। जतिबेला भट्टराइका सहयोगीका रुपमा उनले काम गरेका थिए त्यतिबेला भट्टराईको सहयोगी भन्ने पद आफैमा कुनै मन्त्री भन्दा कम महत्वको मानिदैथ्यो।
कार्यबहाक सभापति भट्टराईको सहयोगी मात्र नभई राजनीतिमा क्रियाशील भएको नाताले उनले पनि ४८ सालको निर्वाचनमा टिकटको आश गरे। तर भट्टराइले आफूसँग बसेको कारण बढी फेबर गर्यो भन्ने आक्षेप लाग्न सक्छ भन्दै अर्को निर्वाचनमा चुनाव लड्न सुझाए।
५०, ५१ सालसम्ममा पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी भइसकेको थियो। जहाँ भट्टराई र उनका सहयोगी विरुद्ध पार्टीभित्रैबाट अस्वस्थ आक्रमण हुन थालिसकेको थियो।
५१ सालको मध्यावधिमा भोजपुर १ बाट चुनाव लड्दा पार्टीकै साथीभाइहरुको अन्र्तघातको शिकार भएर जम्मा २६ मतको अन्तरमा पराजित हुन पुगे।
त्यसपछि पनि उनी ५६ मा भोजपुरबाट निर्वाचन लड्दा पुरानै नियती भोग्नु पर्यो। ६४ सालमा त झनै देशभरी नै माओवादीको हावा हुण्डरीकाबीचमा चुनावमा तेस्रोपटक पराजित भए।
पराजयको राजनीतिले उनको राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम भने लागेन।
पार्टी विभाजनपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति सदस्यमा मनोनित गरे पछि १२औं र १३औमा पनि निरन्तर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुँदै आएका छन्।
राजाले ६१ सालमा ‘कु’ गरेपछिको समयमा चलेको आन्दोलनका क्रममा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापति जेलमा थिए, भने आन्दोलनको संयोजक प्रकाशमान सिंह र सहसंयोजक कार्की थिए।
प्रकाशमान पनि जेल परेपछि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सर्वदलीय आन्दोलन परिचालन समितिको सदस्य भएर क्रियाशिल भए।
आन्दोलनको सफलतासँगै बनेको गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सर्वदलीय सरकारमा उनी जलस्रोत मन्त्री बने। जतिबेला बहुचर्चित अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना ग्लोबल टेण्डर आव्हानमार्फत संचालनको सझौता गराए। त्यसैगरी स्वदेशी लगानीबाट तामाकोशी जनविद्युत परियोजना संचालनको शुरुवात गरे।
कतिपय व्यक्तिहरु चर्चामा आउन विभिन्न विधिहरु अपनाउने गर्छन। तर उनमा चर्चाको मोह छैन। भन्छन्, ‘के गर्दा चर्चा हुन्छ त्यो थाहा छैन तर म राजनीति व्यक्तिगत चर्चाका लागि नभएर समाज परिवर्तनका लागि निष्ठा र मूल्य मान्यता, त्याग र समपर्ण भावमा आधारित दिगो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु।’
कतिपयले अर्थशास्त्रको ज्ञान नभएको ज्ञानेन्द्र भन्ने आलोचनाको बारेमा पूर्णजानकार रहेर पनि आफ्ना आलोचकप्रति कुनै नकरात्मक प्रतिक्रिया दिदैनन। मधुर स्वरमा बोल्ने बानी परेका कार्कीले आफ्ना विरुद्ध आएका टीका टिप्पणीबारे भन्छन्, ‘यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरी आएपछि अब मैले पाएको गहन जिम्मेवारी बोध गर्दै सिंगो मुलुकको आर्थिक समृद्धि के कसरी गर्न सकिन्छ, त्यहि कुरामा केन्द्रीत हुन्छु र मुलुकको लागि केही योगदान दिन्छु। त्यो नै मेरा विरुद्ध लागेका आलोचकलाई कठोर जवाफ हुन सक्छ, ओठे जवाफ फर्काएर हुदैन।’
मानिस को कति सफल र असफल भन्ने कुरा उसले गर्ने कामका आधारमा मूल्याकन हुने उनको विश्वास छ। ‘कसरी जनताको जीवनमा उनीहरुले महसुस गर्नसक्ने गरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ यसैमा मेरो ध्यान केन्द्रीत हुने छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धि र दिगो आर्थिक विकासका लागि युवा स्वरोजगारको बृद्धि गर्नु नै आजको चुनौति हो। युवाको मन जित्न सके सफलता त्यहि छ।’
आफू सहि मन, बचन र कर्मले अगाडि बढ्यो भने खट्टा तान्ने र आलोचनाले खासै फरक नपर्ने उनको बुझाई छ।
पारर्दर्शीता, जवाफदेहीता र सुशासनमा विश्वास गर्दै सादा जीवनलाई जीवन दर्शनको रुपमा लिएको उनी बताउँछन्।
केही महिनाअघि श्रीमती र हालसालै बाबु गुमाएका कार्कीले आफ्नो नीजि जीवनमा आइपर्ने हरेक चुनौतिको सामना गर्दै बाँकी जीवन देश, जनता र समाजका लागि केही गर्ने उद्देश्य पालेका छन्। उनी भन्छन्, ‘आफ्ना लागि गर्ने त सबै हुन्छन र म पनि त्यसबाट बाहिर छु भन्ने होइन, तर म आफ्ना लागि होइन समाज र देशका लागि केही गर्नु पर्छ भन्ने भावनाले अघि बढेको व्यक्ति हुँ। अहिलेसम्म निश्कलंक रहेको व्यक्तित्वलाई पछिसम्म कायम गर्नु नै मेरो ध्येय हो।’
Prevपछिल्लोदङ्गीशरण गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा नेका
अघिल्लोबराहपोखरी गाउँपालिकामा कांग्रेस विजयीNext